प्याजको भाउ प्रतिकिलो दुई सय ५० रुपैयाँ ! – खबर खुराक
Home > समाचार > प्याजको भाउ प्रतिकिलो दुई सय ५० रुपैयाँ !
काठमाडौं , १० मंसिर । नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य उपभोक्ता निस्सासिने गरी बढेको छ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिले मंगलबारका लागि सुकेको प्याजको प्रतिकिलो होलसेल मूल्य नै दुई सय रुपैयाँ तोकेको छ ।
प्रकाशित मिति: १० मंसिर २०७६, मंगलवार १४:०३
Posted in समाचारTagged प्याजको मूल्य अहिलैसम्मकै उच्च
Previous: राजधानी र नाम छिटो टुङ्ग्याउनुस्: अध्यक्ष प्रचण्ड
Next: मजदुरको नाममा १३ वटा कम्पनी दर्ता गरेर १ अर्ब २९ करोड राजस्व छली गर्ने २ जना पक्राउ